Mitsahatra amin`ny maha mpikambana azy eo anivon`ity Vondrona Afrikanina ity i Soudan mandra-pahitan`izy ireo vahaolana hipetrahan`ny fanjakana tantanana sivily amin`ny alalan`ny tetezamita. Nanao fanambarana ampahibemaso mahakasika izay ny filankevitry ny Vondrona afrikanina teo anivon`ny fandriampahalemana. Ny fametrahana tetezamita tantanana sivily ihany no no ahafahan`i Soudan mivoaka an`izany krizy izany. Ny tafika any an-toerana izay mandrara ny fidinana an-dalambe manohitra ny nahalany an`i Omer El Bechir teo amin`ny fitondrany ny 11 aprily lasa teo. Etsy an-kilany, ny alahady lasa teo, miantso ireo hery famoretana rehetra ny Vondrona SPA (Association des professionels soudanais) ho fanoherana ireo herisetra ataon`ny miarammila any Soudan ka hanao ny hetsika “desobeissance civile” hatramin`ny hahazoana ny fitondrana. Hetsika sivily afaka mandrobaka fahefana na aiza na aiza eto an-tany raha ny fanazavana. Tsy mbola naseho ampahibemaso io hetsika io. Raha ny zava-misy, mbola mikatona avokoa ireo toeram-pivarotana ao Soudan ary mbola ahitana barazy maro ataon`ireo sivily. Amin`ny faritra sasany kosa, ireo miaramila no manala ireo barazy ireo. Araka izany, mbola mihenjan-droa ny tady ao Soudan na dia efa nandalo tany an-toerana aza ny praiminisitra etiopianina nanao fanelanelanana.